Filtrer les éléments par date : jeudi, 10 octobre 2019
jeudi, 10 octobre 2019 21:36
Mpampiofana efatra mianadahy avy any Nairobi Kenya no tonga mizara traikefa amin’ireo mpiompy tantely avy amin’ny Distrikan’i Morondava, Mahabo, Miandrivazo ary Belo Tsiribihina nanomboka ny alarobia 9 oktobra 2019.
Anofanana azy ireo ny fomba fiompiana tantely manarapenitra sy ny fiompiana tantely miaro ny tontolo iaina ary fomba fanodinana ny tantely.
Hitohy hatramin'ny alahady ny fiofanana.
jeudi, 10 octobre 2019 21:25
Moramanga: Nampahafantarina androany ny Governoran’Alaotra Mangoro, Dr Richard Ramandehamanana
Nototosaina teto Moramanga androany alakamisy 10 oktobra 2019 ny lanonana nametrahana amin’ny toerany ny Governora vaovaon’ny faritra Alaotra Mangoro, Dr Richard Ramandehamanana. Nitarika ny lanonana teto an-toerana ny Tale jeneraly misahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena, Augustin Andriamananoro.
Efa lehiben’ny Faritra Alaotra Mangoro tamin’ny tetezamita i Dr Richard Ramandehamanana. Tale lefitry ny fampielezan-kevitry ny Komity mpampandany ny “ENY” izy, nanampy an’i Augustin Andriamananoro, nandritra ny fitsapankevi-bahoaka momba ny Lalampanorenana natao ny 17 novambra 2010.
jeudi, 10 octobre 2019 20:51
Antsakoamanondro-Ambanja (RN6): Mpizaika anglikana tra-doza, roa namoy ny ainy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana tao Antsakoamanondro, 12 km tsy hidirana an’Ambanja raha avy any Ambilobe androany alakamisy 10 oktobra 2019 manodidina ny tamin’ny 10 ora maraina.
Fiara Mazda minibus iray, nitondra mpivavaka anglikana hamonjy fivoriamben’ny Anglikana ao Ambanja no tra-doza, nifatratra tamin'ny hazo, raha niala mpitondra bisikileta mitondra saribao. Namoy ny ainy ny roa tamin’ireo olona roapolo tao anaty fiara. Naratra ny ambiny. Tsaboina ao amin’ny Clinique Saint Damien sy hopitaly be Ambanja ireo maratra.
jeudi, 10 octobre 2019 19:38
Plan Emergence Madagascar: La version préliminaire présentée aux Partenaires Techniques et Financiers
Les membres du gouvernement ont rencontré les partenaires techniques et financiers de Madagascar dans une réunion présidée par le Premier ministre Christian Ntsay, ce jour au ministère des Affaires étrangères Anosy, où la partie Malagasy a présenté une base de la version préliminaire du Plan Emergence Madagascar, à la fois insistant sur les visions du Président de la République, entre autres ses 13 engagements, et sur la déclinaison de la politique générale de l’Etat dans ledit plan.
jeudi, 10 octobre 2019 16:10
Radaka boka: Mety mandany 60 tapitrisa dolara vao ringana eto Madagasikara
Toamasina sy ny manodidina no mby an-tsaina vao “radaka boka” no resahina. Tamin’iny faritra iny rahateo no nahitana sy nandrenesana ny fisiany voalohany teto Madagasikara. Avy any amin’ny faritra Azia any, mety ho Cambodge na Vietnam na Thaïlande no fiavian’ity biby ity, ary niditra teto tamin’ny 2010 - 2011 nanaraka ireo entana tonga tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina.
Haingam-pitombo satria manatody eo amin’ny 40 000 isan-taona ny radaka boka. Tombanana eo amin’ny 120 km² ny velarantany efa ahitana io karazan-tsahona misy poizina io amin’izao fotoana, amin’iny atsimon’i Toamasina iny, ary any amin’ny 4 tapitrisa any ny isany raha ny vinavina tamin’ny 2015, araka ny voka-pandinihana nataon’ny Dr James Reardon, avy any Nouvelle-Zélande.
jeudi, 10 octobre 2019 16:07
Kitra - Lalao fanomanan-tena: Barea CHAN # Sélection Analamanga
Hiatrika lalao fitsapana amin’ny ekipa rafetin’ny mpilalao voafantina ato amin’ny ligin’Analamanga ny Barea CHAN ny tolakandron’ny sabotsy 12 oktobra 2019, eny amin'ny kianja Elgeco Plus By-pass – Antananarivo. Lalao fanomanan-tena fahatelo hatrehin’ny Barea CHAN ity mialoha ny hiazoany an’i Namibia, hanao lalao miverina amin’ny 18 oktobra 2019.
jeudi, 10 octobre 2019 15:53
Ambohijanahary – Antehiroka: 05 lahy mitam-basy nandroba vola sy firavaka ary fitaovana informatika
Ny alin’ny alarobia hifoha ny alakamisy 10 oktobra 2019, tamin’ny 1 ora maraina, no nitrangan’ity fanafihana mitam-basy ity tao Ambohijanahary, Kaominina Antehiroka, Distrika Ambohidratrimo.
Dimy lahy mitam-basy no nanafika ity tokantrano ity. Nofatoran’izy ireo ny mpiambina, avy eo niditra nanao am-boletra ireo jiolahy, sady nanambana basy ny tao an-trano hanome vola sy firavaka.
Nentin’ny tahotra ny tompontrano ka nanome ny firavaka volamena, finday miisa fito, ordinatera entin-tanana iray, miampy « tablette » iray ary vola 200 000 Ariary.
jeudi, 10 octobre 2019 14:35
Ambilobe: Rongony 800kg nodorana, fototra rongony tamina velaran-tany 2,5 Ha nopotehina
Mitohy ny fandravana ny tambazotra mpanao trafika rongony aty anaty ala amin’ny Distrika Ambilobe. Ny alin’ny 9 oktobra 2019 dia olona miisa 11 ka vehivavy ny 3, no saron’ny Zandary tany anaty ala niaraka tamin’ny rongony 35 gony, milanja any amin’ny 800kg, ary nodorana rehefa nahazo fahazoan-dalana.
Nandritra ity hetsika ity ihany koa dia fototra rongony amina velaran-tany 2,5 hekitara no nopotehina.
jeudi, 10 octobre 2019 14:22
Antsohihy: Tsikombakomba hampandosirana gadra ?
Mampiahiahy ny zava-nitranga ny 8 oktobra 2019. Nanao fangatahana hivoaka ivelan’ny fonja Antsohihy, Rtoa Zafintsoavina Séverine, Ben’ny tanàna teo aloha tao Angoaka-Sud, Distrikan’Analalava, Faritra Sofia fa hikarakara taratasy hidirana ho dokotera. Nanome fahazoan-dalana azy ny Talem-paritry ny fandraharahana ny fonja Sofia, saingy misy mpanaraka (sous escorte).
Solombavam-bahoaka amperinasa no nitondra azy, ary efa tany Port-Bergé i Séverine no naverina rehefa nanao fisafoana tampoka ny Mpitsara mpanampy (Substitut). Naverina avy hatrany ao amin’ny fonjan’Antsohihy i Séverine taorian’izay.
Eo ampelan-tanan’ny Zandary GAPJ (Groupe d'Appui à la Police Judiciaire) Sofia ny raharaha ankehitriny, mandeha ny famotorana.